मलेसियान सरकारले सबै कामदारको तोकेको न्यूनतम तलब कति ? - jagritikhabar.com
मलेसियान सरकारले सबै कामदारको तोकेको न्यूनतम तलब कति ?
MTUC उपाध्यक्ष, मोहम्मद इफेन्डी अब्दुल घानीले हालको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको स्तरसँग नमिल्ने भएकाले बृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको बताए ।
“वर्तमान न्यूनतम ज्यालामा MTUC को अडान उठाउन आवश्यक छ, जबकि एकै समयमा हामी बुझ्छौं कि रोजगारदाताहरू केवल सञ्चालन गर्न र नगद प्रवाह प्राप्त गर्न चाहन्छन्।
‘न्युनतम पारिश्रमिक रु १५०० लागू गर्न राष्ट्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद्मा सरकार, रोजगारदाता र कर्मचारीबीच छलफल हुनुपर्ने एमटियुसीको सिफारिस छ,’ उनले हिजो सम्पर्क गर्दा भने ।
नतिजाको रूपमा, त्यहाँ निजामती कर्मचारीहरू छन् जसले परिवारको आवश्यकता पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न मात्र दुईवटा काम गर्नुपर्छ।